Fitaovana majika, mahavita zavatra tsy ampoizina ny ondana. Afaka manova ny fipetraka, eo am-panaovana firaisana ara-nofo izy sy manome fahafinaretana, faran’izay haingana ihany koa.
Voka-pikarohana iray tany ivelany no nilaza fa mampirindra ny mari-pan’ny vatana, ka hahatakarana ny lanitra fahafito ao anatin’ny 1 minitra, ny fanaovana ban-kiraro, rehefa miray ara-nofo.
Manampy hahatakarana fahafinaretana vetivety ny fampiasana “sex toy”. Tsotra ny antony : manampy tosika ny fahafinaretana azo amin’ny firaisana ara-nofo mahazatra ny fampiasana ireny kilalaom-pitia, ireny na ho an’ny vavy, na ho an’ny lahy.
Manome fahasambarana lalina kokoa ny manoroka ny olon-tiana, mialohan’ny hahatongavany any amin’ilay fahafinaretana fara-tampony. Ho vetivety rahateo dia ho tonga io fahafinaretana io. Andramo ange e !